Muxuu Frank Lampard ka yiri inuu dib ugu soo laabto Stamford Bridge isagoo tababare ah? – Gool FM
Muxuu Frank Lampard ka yiri inuu dib ugu soo laabto Stamford Bridge isagoo tababare ah?
Abdirashid Mohamud July 4, 2019
(London) 4 Luulyo 2019. Chelsea ayaa xaqiijisay in Frank Lampard uu si cajiib leh ugu soo laabtay Stamford Bridge isagoo noqonaya tababaraha kooxda, xiddigii hore qaranka England ayaa saxiixay heshiis saddex sano ah.
Halyeeyga Blues kaas oo hal fasal ciyaareed si qurux badan u maamulay Derby ayaa shaqada ka badalaya Maurizio Sarri oo doortay inuu dib ugu laabto wadankiisa talyaaniga kadib fasal ciyaareed uu kooxda u hogaamiyay hanashada tartanka Europa League.
Lampard oo 41-jir ah ayaa saxiixay heshiis saddex sano ah, wuxuuna sanadkii qaadan doonaa lacag dhan 4 Malyan oo Pound, sidoo kalana waxaa jiri doona gunnooyin ku xiran habkiisa maamulka iyo booska uu kooxda ugu dhameeyo, waxaana ugu muhiimsan usoo saarista Champions League.
Jamaahiirta Blues ma iloobi karaan waqtigii quruxda badnaa ee Frank Lampard, wuxuuna noqday goodhaliyaha ugu sarreeya kooxda taariikhda isagoo dhaliyay in ka badan 200 gool dhamaan tartamada oo dhan.
“Sharaf weyn ayey ii tahay inaan dib ugu soo laabto Chelsea anigoo tababare ah” ayuu yiri Frank Lampard.
“Qof walba wuu ogyahay jaceylka aan kooxdaan u qabo iyo taariikhda aan wadaagnay, si kastaba nafteyda waxey diirada saareysaa shaqada waxaana isku diyaarineynaa fasalka soo socda”
“Inta waxaan u imid inaan si adag u shaqeeyo, kooxda kusoo kordhiyo guulo, mana sugi karo inaan bilaabo shaqada”
RASMI: Frank Lampard oo dib ugu soo laabtay kooxda Chelsea
RASMI: Goolhaye Gianluigi Buffon oo dib ugu soo laabtay Kooxda Juventus… + SAWIRRO